I-SWMC 360-DTH Drilling RIG EZINDAWENI ZOKWAKHA ZESHANDONG PROVICE, ECHINA
Umshini wokubhola weXuanhua wenze enye impumelelo ebabazekayo - amayunithi angama-50 e-SWMC 360 okubhola ama-RIGS asebenzise amathani angaphezu kwezi-1,800 eziqhumane esikhathini esingaphansi kwenyanga eyodwa, okungaphezu kokuphindwe kabili ukusetshenziswa kwansuku zonke. I-Tianchen Qixiang Nylon New Material Project, iphrojekthi ebalulekile yesiFundazwe saseShandong enenani eliphelele ...
I-SWMC T45-TH Drilling RIG IYASEBENZA KWI-LIMESTONE QUARRY YOKUGUQULA ISIFUNDA SOKUQALA
Imayini i-Fengshan, etholakala esifundeni i-Changping, eBeijing, iyisisekelo sokuphakelwa kwetshe le-limestone iBeijing Cement Works Co., Ltd., eyalinganiswa njenge “National Green Mine Pilot Unit” nguMnyango Wezomhlaba Nezinsizakusebenza ngo-2011 neyodwa yamabhizinisi okuqala osimende okudlulisa ...
I-SWMC 370-DTH Suburface Drilling rig isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokwakha
I-SWMC 370 imishini yokumba ngaphansi komhlaba igcwalise ngempumelelo iphrojekthi yokuqoqa isisekelo sephrojekthi yezindlu eGuangzhou, eChina. Iphrojekthi yezindlu eGuangzhou ihlanganisa indawo engama-62,000 m2, lapho i-44,000 m2 ingaphezulu komhlaba kanti i-18,000 m2 ingaphansi komhlaba. Kunezitezi ezingama-25 ngaphezulu komhlaba ...
Ngokushoda kwamandla kagesi okwandayo, ukuthuthukiswa nokusetshenziswa kwamandla amasha kuhehe ukunaka kwawo wonke amazwe emhlabeni.Ngaso leso sikhathi, amandla amasha e-China enza amandla ngokushesha, futhi ubuchwepheshe buya bukhula kancane kancane, buya noma buya kabusha. ..
Septhemba — Ikota lekwindla liza, inkathi yokuvuna enezithelo ezicebile nephunga elimnandi! Ugandaganda ofaka ukusebenza kanzima kwabasebenzi be-HBXG boPhrojekthi waseRussia iPetroplem owawina i-HBXG uphinde wathunyelwa ngempumelelo emakethe ye-CIS! Lokhu ukuthengwa kwamathenda kwesibili kwe ...
I-SWMC, umkhiqizi woMshini wokubhola, ngendlela efanayo yokuhlinzeka ngemikhiqizo yomshini ophelele kumakhasimende, isebenzisa iminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni somkhakha ukuhlinzeka ngezixazululo ezinokwethenjelwa zabasebenzisi bemishini yokubhoboza ingaphansi komhlaba nokusiza amakhasimende servi ...
NgoMashi 12, 2020, iqoqo le-SD7N i-bulldozer ephakeme-yathunyelwa ukuzohlala futhi ilungele ukulayishwa kwezimakethe zezifunda zaseRussia neCIS. La mabatch bulldozer athengwa yikhasimende lezimayini, ukwenza lo msebenzi wokuhlunga nokuqongelela izinto zokwakha ikhava. Bathenga ...
Ukulwa Nemishayabhuqe, Ukuletha Isikhathi!
Njengoba bebhekene nokuqubuka komqedazwe we-noval coronavirus, abasebenzi be-SWMC bathatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuqinisekisa "icala lokutheleleka ngeZero", futhi bezama konke okusemandleni ukwenza ukuthunyelwa kugcine isikhathi. NgoMashi 5th, 2020, iqoqo le-TS160-3HW bulldozer lathunyelwa eSoutheast ...
Umshini wokubhola weXuanhua wenze enye impumelelo ebabazekayo - amayunithi angama-50 e-SWMC 360 okubhola ama-RIGS asebenzise amathani angaphezu kwezi-1,800 eziqhumane esikhathini esingaphansi kwenyanga eyodwa, okungaphezu kokuphindwe kabili ukusetshenziswa kwansuku zonke. I-Tianchen Qix ...
Imayini i-Fengshan, etholakala esifundeni i-Changping, eBeijing, iyisisekelo sokuhlinzekwa kwempahla eluhlaza okwenziwe nge-limestone eBeijing Cement Works Co., Ltd., eyayilinganiswe njenge “National Green Mine Pilot Unit” nguMnyango We ...